Doorashada guddoonka guddiga maaliyada qaranka ayaa waxaa lagu qabtay Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Waxaana Xildhibaan Maxamuud Siraaji ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga maaliyada, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shacabka.
Xildhibaan Aamino Sheekh Cusmaan ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyada, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shacabka.
Sidoo kale waxa uu sheegay in guddoonka Golaha Shacabka uu diyaar u yahay iney guddiga kala shaqeeyaan dardar gelinta howlaha culus iyo sidii loogu qaban lahaa waqtiga haray shaqooyinka horyaalla.
Doorashada waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad, Habdhowraha Golaha Shacabka mudane Maxamed C/llaahi Xasan iyo Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka mudane C/kariin Xaaji Cabdi.
December 30, 2018 Geesey